अपर तामाकोशीको शेयरमा आवेदन दिने समय सकियो, कति पर्यो आवेदन ? - Dainikee News::
अपर तामाकोशीको शेयरमा आवेदन दिने समय सकियो, कति पर्यो आवेदन ?
काठमाडौं, कात्तिक १९ । कात्तिक १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि विक्रीमा आएको अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने अवधि सोमवार सकिएको छ । कम्पनीले छिटोमा कात्तिक १९ र ढिलोमा मङ्सिर १४ गतेसम्म विक्री खुला गर्ने सुचना जारी गरे पनि छिटो अवधिमै मागभन्दा बढी आवेदन परेकाले विक्री बन्द भएको हो ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको साधारण शेयरमा रु ६ अर्ब बढीको आवेदन परेको छ । यही कात्तिक १५ गते बिहीबारदेखि बिक्री शुरु भएको सो कम्पनीको साधारण शेयरमा आज साँझसम्म रु ६ अर्ब बराबरको आवेदन परेको हो । अन्तिम विवरण भने मङ्गलबार प्राप्त हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालको शेयरबजारमा आएको यो नै शेयर संख्या र रकमको हिसाबले सबै भन्दा ठुलो आईपिओ हो ।
इक्रा नेपालले आईपिओलाई ग्रेड ४ को रेटिंङ दिएको छ । इक्रा नेपालले १ देखि ५ अंक स्केलमा ग्रेडिङ प्रदान गर्दछ, जसमा ग्रेड १ ले बलियो आधारहरु जनाउछ भने ग्रेड ५ ले कमजोर आधारहरु जनाउँछ। ग्रेड २, ३, ४ मा प्रयोग गरिने प्लस चिन्हले त्यस समूहका तुलनात्मक सकारात्मक स्थितिलाई जनाउंछ।
कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ४५६ मेगावाटको परियोजनामा कम प्रतिफल क्षमता रहेको, नाकाबन्दी, भूकम्प जस्ता विविध कारणले निर्माणमा ढिलाई हुँदा लागत बढ्नु, निर्माणको लागि लागि लिएको ठुलो मात्राको ऋण चुक्ता हुन् समय लाग्ने कारणले गर्द औसत भन्दा कमजोर रेटिंङ पाएको कम्पनीले जनाएको छ । दोलखाको गौरीशङ्कर गाउँपालिका–१ लामाबगरमा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोशी आयोजनाको पूर्व स्वीकृत लागत ३५ अर्ब भए पनि बढेर ४९ अर्ब पुगेको छ । असार मसान्तसम्ममा सिभिलको काम सकेर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य राखेको छ । डिसेम्बर २०१८ देखि नियमित उत्पादन शुरु भए पनि सबै निर्माण सक्न थप ६ महिना लाग्नेछ ।
आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २–२ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोषको १७ दशमलव २८, स्थानीयबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५, कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीको २ दशमलव ८८, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीको ३ दशमलव ८४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ।
कम्पनीले यस अघि स्थानीय वासिन्दाको लागि निष्काशन गरेको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता शेयर बुधबार बाँडफाँड गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, कार्तिक १९, २०७५ /Monday, November 5th, 2018, 7:40 pm